mercredi, 27 novembre 2019 18:44
Andrefan’Ambohijanahary: Novaina ny lisi-pifidianana, nanjavona ny anaran’ny mpifidy
Tsy lisi-pifidianana nampiasaina tamin’ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin’ny volana mey 2019 no tao amin’ny EPP Andrefan’Ambohijanahary, Boriborintany faha-4 Antananarivo Renivohitra.
Olona nandatsa-bato tao amin’ny BV n°1 tamin’ny volana mey, nafindra any amin’ny BV n°4, ary niova sady diso ny anarany. « Rakotovazaha » nanjary « Rakotocazaha », nefa ny laharana kara-panondro sy ny kara-pifidianana tsy niova, izany hoe namerina nanao "saisie" indray izany, nefa ny lisitra efa nakatona tsy kasikasihina intsony.
Novaina ny lisi-pifidianana satria nisy olona tonga nifidy tamin’ny volana mey, nefa nanjavona tsotra izao tao anaty lisi-pifidianana raha tonga hifidy androany maraina. Tsy tranga iray na roa fa maromaro no sendra io tranga io.
mercredi, 27 novembre 2019 18:27
27 novambra: Fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolotsaina
Notanterahina manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara androany alarobia 27 novambra 2019 ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolotsain’ny tanàna amin’ireo Kaominina miisa 1695 eto Madagasikara.
Nisokatra tamin’ny 6ora maraina ny Biraom-pifidianana, ary nikatona tamin’ny 5ora hariva.
Efa manomboka manisa vato ankehitriny ireo biraom-pifidianana, raha hita fa tsy navitrika nandeha nifidy ireo mpifidy.